Itekhnoloji kunye neNtengiso
NgoMgqibelo, Disemba 26, 2009 NgoLwesihlanu, ngoJuni 9, 2017 Douglas Karr
Ibhola ekhatywayo yaseMelika isondele
Ngakumbi nangakumbi amashishini amkela itekhnoloji xa isiza kubuchule bokuthengisa. Nini UPepsi wakhupha iSuper Bowl, iintatheli zemveli zayibiza njalo ukungcakaza.
Ngaba ukungabhengezi kwi-Super Bowl kukungcakaza? Ngokwenene?
Intengiso yeSuper Bowl ixabisa i-3 yezigidi zeedola kwimizuzwana engama-30. UPepsi ucwangcise iintengiso ezimbini zecoondond ezingama-30 kunye nentengiso yesibini yesibini… zizigidi ezili-60 zeedola. Ixabiso lenyuka ngaphezulu kwe-12% phakathi kuka-10 no-2008. Masenze izibalo. Yizigidi ezili-2009 zeedola ukufikelela kubabukeli abazizigidi ezingama-12 .. okanye malunga ne-98 yeedola kumbukeli ngamnye.
Masingakulibali oko Inzuzo yePepsi yawa ngama-43 ekhulwini ngelixa ngenene wenza hlawula iintengiso zeSuper Bowl. Hmmm, kuvakala ngathi iintengiso zeSuper Bowl khange zihlawule.
Oku akubandakanyi, ewe, i gembula lokwenyani… Ukuqesha iarhente enokuvelisa urhwebo oluya kuqhuba iitoni zendlela kuhlobo lwakho. Masenze ngathi nganye itoti yesoda izuze i-0.10 yeedola… oko kuthetha ukuba iintengiso zikaPepsi kufuneka ziqhubele umntu ngamnye kubabukeli ukuba athenge iPepsi enye (ngaphezulu kwe-100 yezigidi zesoda) ukuhlawula iindleko zentengiso.
Ayenzekanga, kwaye ayizukwenzeka.
Ngokuchasene noko, ngokwamkela imidiya yedijithali, uPepsi angatyala imali kubuchwephesha bentsholongwane okanye kwezentlalo ngeqhezu leendleko kunye no-rnganye inani elifanayo lababukeli. Ewe ngekhe yenzeke kwisiganeko esinye kwimizuzu emi-2… kodwa ngoobani abakwingqondo yabo elungileyo abayifunayo? I-Pepsi idinga isicwangciso-qhinga sexesha elide kunye nezinye iimveliso ezilungileyo ukuyibuyisa.
Kuthekani ukuba uPepsi uxhase ukhuphiswano 'lwentengiso ebalaseleyo' apho ophumeleleyo ephumelele i-1 yezigidi zeedola? Ngomnye isigidi esi-1 seedola kumabhaso awongezelelweyo? Mhlawumbi bakhuthaze ukhuphiswano kuyo yonke i-YouTube, i-Twitter kunye ne-Facebook ngotyalo-mali olongezelelweyo lwe- $ 1 yezigidi.
Yeyiphi indlela ocinga ukuba ingafikelela ngakumbi… kunye nabaphulaphuli kunye nomyalezo ochaphazelekayo? Itekhnoloji kunye nentengiso ziya zihlangana ngakumbi kunye kunye nexesha lazo lokuba iinkampani ezininzi zivule amehlo abo kumathuba amangalisayo akhoyo.
Inqaku nje: Andiyiyo, nangayiphi na indlela, ndixoxa ukuba ingaba ziyasebenza na okanye azisebenzi iiSuper Bowl Ads. I-GoDaddy ibe nempumelelo enkulu kule minyaka idlulileyo yokufumana isabelo sokubhaliswa kwesizinda kunye ezinye iintengiso ezingenangqondo. Lo ngumzekelo nje omkhulu xa ungasebenzi kunye namathuba okwandisa imbuyekezo kutyalo-mali ngamajelo edijithali.
Elinye inqaku: Ndicinga ukuba uPepsi ufuna ukuyilahla i-logo entsha. Isisimumu.
tags: intengisoZorhwebopepsiisitya esikhulu
Ngamanye amaxesha ukuthengisa amalahle kuvelisa iidayimani
Dec 26, 2009 ngo-9:59 PM
Ndicinga ukuba luluvo olungcono kwaye luhlala ixesha elide ukungazenzi iintengiso zeSuper Bowl kwaye uchithe imali kwenye indawo. INtaba iDew sele inomcimbi wevidiyo owenziwe ngumsebenzisi, kwaye beza nomxholo ogqwesileyo. Malunga nelogo, uPepsi ekugqibeleni uzama ukuza kweyakhe, endaweni yokunkqonkqoza kwifonti kaCoke. Ndiyazibuza ukuba ngubani oweza neLogo kuqala nangona, iPepsi okanye iqela lephulo lika-Obama. Ilogo ngokwayo ayibonakali imele nantoni na.